Mpanamboatra sy mpanamboatra pilotra tsara indrindra SPA5 | SINOVO
Mpamadika vongan-tsolika SPA5
Famaritana (vondrona misy modely 12)
Ny halavan'ny savaivony (mm) Ф950-Ф1050
Fanerena tsorakazo ambony indrindra 320kN
Kapoka ambony indrindra amin'ny varingarina hydraulic 150mm
Tsindry faran'izay avo amin'ny varingarina hydraulic 34.3MPa
Fantsom-bolan'ny varingarina tokana 25L / min
Hetezo ny isan'ny antontam-bato / 8h 60pcs
Haavony amin'ny fanapahana tumpaka isaky ny mandeha Mm 300mm
Fanohanana ny milina fandavaka Tonnage (excavator) ≧ 20t
Lanjan'ny modely tokana 110kg
Ny haben'ny modely iray 604 x 594 x 286mm
Refy momba ny satan'ny asa Ф2268x 2500
Ny lanjan'ny mpanapotipotika tanteraka 1.5t
Parameteran'ny SPA5 Fananganana
Isa nomerika Ny halavan'ny savaivony (mm) Lanjan'ny lanja (t) Ny lanjan'ny mpanapotipotika (kg) Haavon'ny antontam-potaka tokana (mm)
Ny fanapahana paompy hydraulic dia misy ireto manaraka ireto: fandidiana mora, fahombiazana avo lenta, vidiny ambany, tsy fitabatabana, fiarovana sy fitoniana bebe kokoa. Izy io dia tsy misy herin'ny fiatraikany amin'ny vatan'ny ray aman-dreny amin'ny antontam-bato ary tsy misy fiatraikany amin'ny fahaizan'ny antontam-pile ary tsy misy fiatraikany amin'ny fahafaha-mitondra azy, ary mampihena be ny vanim-potoana fananganana. Izy io dia azo ampiharina amin'ny asan'ny vondrona misy antontam-bato ary atolotry ny sampan-draharaha fananganana sy ny sampan-draharaha misahana ny fanaraha-maso.
1.Eniversite-friendly: Ny familiana feno hydraulic dia miteraka tabataba kely mandritra ny fiasana ary tsy misy fiatraikany amin'ny tontolo manodidina.
2.Tambany ambany: mora sy mora ny rafitra miasa. Mpiasa miasa vitsy an'isa no takiana mba hitsitsy vola ho an'ny fikolokoloana ny asa sy ny milina mandritra ny fanamboarana.
3. Volavola kely: Mazava ho an'ny fitaterana mety.
4.Sety: azo ampiasaina ny fandidiana tsy misy fifandraisana ary azo ampiharina amin'ny fananganana endrika tany sarotra.
Fananana 5.Universal: afaka entin'ny loharanom-pahefana isan-karazany izy io ary mifanaraka amin'ny excavator na ny rafitra hydraulic arakaraka ny toetoetran'ny fananganana. Azo ovaina ny mampifandray milina fananganana maro miaraka amin'ny fahombiazana manerantany sy ara-toekarena. Ireo rojo manainga antsamotady telesopika dia mahafeno ny fepetra takiana amin'ny endrika tany isan-karazany.
6. fiainana maharitra: vita amin'ny fitaovan'ny miaramila avy amina mpamatsy kilasy voalohany manana kalitao azo itokisana izy io, manitatra ny androm-piainany.
7.Fanampiana: kely ho an'ny fitaterana mety izany. Ny fampifangaroana modely azo ovaina sy azo ovaina dia azo ampiharina amin'ny piles misy diamondra isan-karazany. Ireo modules dia azo angonina ary esorina mora foana sy mora.
1. Araka ny savaivon'ny antontam-bato, miaraka amin'ny masontsivana fanovozan-kevitra momba ny fananganana mifanaraka amin'ny isan'ny modules, ampifandraiso mivantana ireo mpandika lalana amin'ny sehatry ny asa miaraka amin'ny mpampitohy fanovana haingana;
2. Ny sehatra miasa dia mety ho excavator, fitaovana fampakarana ary fitambarana tobin-drano paompy hydraulic, ny fitaovana fampiakarana dia mety ho crane crane, crane crawler, sns;
3. Afindra amin'ny fizarana lohan'ny antontam-bato ny mpamaky antontany;
4. Ampifanaraho amin'ny haavony mety ny fanapahana ny antontam-bato (azafady mba jereo ny lisitry ny fananganana parameter rehefa manorotoro ny antontam-bato, raha tsy izany dia mety ho tapaka ny rojo), ary fehezo ny toerana azo atsofoka;
5. Amboary ny tsindry ataon'ny mpitrandraka arakaraka ny tanjaky ny beton, ary tsindrio ny varingarina mandra-pitraky ny antontam-bato amin'ny tsindry avo;
6. Aorian'ny fanorotoroana ny antontam-bato dia atsangano ny sakana vita amin'ny beton;
7. Afindra amin'ny toerana voatondro ny antontam-pototra torotoro.
Teo aloha: TR500C Rotary Drilling Rig
Manaraka: TR60 Rotary Drilling Rig
Manofa mpandika beton
Breaker Concrete Hydraulika
Breaking Pile Round